Adhesions - Martsa izao
Hisafidy ... Alemania Arzantina Bolivia Brasil Shily Kolombia Korea Atsimo Costa Rica Ekoatera España Etazonia Federación Rusa Frantsa Gambia Honduras India International Italia Japana Panama Peru Senegal Soisa Uruguay
Hisafidy ... hafanam-po kanto fanatanjahan-tena Zon'olombelona tontolo iainana fanabeazana Literatura kaominina mozika Lohahevitra hafa Fandriampahalemana sy tsy fifandeferana Gazety sy haino aman-jery politika Fivavahana sy ara-panahy Theatre TV
Hisafidy ... vondrona Institiota fampianarana fikambanana Fikambanana hafa olona
faritra: Lohahevitra hafa
Firenena niaviany: España
Adhesion Date: 19 Martsa 2020
Ny fikambanana "Mercado As Conchiñas" dia mifikitra amin'ny "Andiany faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana" ao amin'ny Coruña.
Komitim-paritany Trieste ARCI
Firenena niaviany: Italia
Adhesion Date: 11 Martsa 2020
Ny Komitim-paritany ARCI Trieste dia mifikitra amin'ny Martsa faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana.
KOMISIN'NY MPIASA - Coruña
Ny CC.OO. "Unión Comarcal de A Coruña" dia manaraka ny "Diabe Iraisam-pirenena faha-2 ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fanarahan-dalàna", tamin'ny alàlan'ny sekretera jeneraliny Cristóbal González.
Tranon'i Pace Milano
faritra: Fandriampahalemana sy tsy fifandeferana
Adhesion Date: 21 Febroary 2020
Ny fikambanana Casa per la Pace Milano dia manaraka ny martsa faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana.
Adhesion Date: 20 Febroary 2020
ANED Ronchi dei Legionari dia mifikitra amin'ny volana martsa faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana
Komitim-paritany ARCI any Brescia
Ny Komitim-paritany ARCI any Brescia dia mifikitra amin'ny Martsa faha-2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana.